Ppingzụ ahịa na China: Ahịa Shanghai (Nkebi 1) | Akụkọ Njem
Njem Asia | | China, General, Shanghai, Asia njem
Onye na-anaghị achọ ịga ahịa? Azịza ya bụ enweghị obi abụọ ọ bụla. N'oge a anyị kpebiri ịhọrọ n'ime obodo ndị ọzọ nke Chinanwere Shanghai ịmara ahịa ha ma zụta ihe niile anyị chọrọ. Dịla njikere ịmalite njem ahụ?
foto akwụ ụgwọ: Ogbe 127
Tupu ịmalite ụzọ anyị taa anyị ga-eme ka ọ pụta ìhè na okwu ahụ bụ "ahịa" na China dabara adaba na oghere ebe anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ngwaahịa nke otu ụdị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta ọla, mgbe ahụ ọ ga-abụ ezigbo echiche ịga ahịa pel, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta uwe, ọ ga-abụ ezigbo echiche ịga ahịa ahịa, were gabazie na ngwaahịa dị iche iche . Ọ dị ka atụmatụ dị mma iji mezuo ihe anyị na-achọ, ọ bụ na ị naghị eche?
foto akwụ ụgwọ: emily
Mbụ anyị ga-aga Ahịa Tai Dong. Ọ bụ ihe ochie ahịa. N'ezie, ihe na-atọ ọchị bụ na ị gaghị achọta ihe dị oke ọnụ site na narị afọ gara aga. Na Shanghai, a pụrụ ịghọta ihe mgbe ochie dị ka ihe ndị e mepụtara n'afọ gara aga. Buru nke ahụ n'uche, ọ gaghị abụ na ị ga-akwụ ụgwọ dị elu na-eche na ngwa ahịa ahụ emeela agadi mgbe n'ezie ọ bụghị ihe karịrị otu afọ mgbe emechara ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụrụ ihe na ahịa a, ị ga-agarịrị ụzọ Xizang Nan. Ọ dị mkpa igosi na ọ bụ ahịa na-eje ozi naanị n'ehihie, site na 9: 30 n'ụtụtụ ruo mgbe anyanwụ dara. Kedu ihe ndị anyị nwere ike ịhụ ebe a? Usoro ihe ncheta dị iche iche na ihu Mao, foto nke mba ahụ, arịa poselin, mkpụrụ osisi ndị ọzọ, na ndị ọzọ. Nwere ike ịzụta ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ije ọ dịkwa mma. Naanị ihe anyị nwere ike iji obi sie gị ike bụ na ị gaghị agwụ ike. N'ezie, n'ọnụ bụ mkparịta ụka na haggle ndị ahịa, ị ga-enweta nnukwu ego. Echefukwana.
foto akwụ ụgwọ: JoeA mụrụ
Nke abụọ anyị ga-eleta ndị Ahịa Pearl. Ọ bụ ahịa n'ahịa maka ụdị ọla a. Nwere ike ịhụ ụdị pel dị iche iche, ma ọ bụ nke mmiri dị mma ma ọ bụ nke oke osimiri na-amịpụta. Na mgbakwunye na pel, ị nwekwara ike ịchọta ụfọdụ nkume dị oké ọnụ ahịa na kristal mara mma. Na-amaja ịzụta nke ọ bụla n'ime ha? Ma eleghị anya, n'agbanyeghị na ha abụghị eziokwu, ha dị ka nke a, ọ ga-efu gị naanị dollar ole na ole. N'ezie, cheta na ị ga-akparịta ụka, ma eleghị anya ị ga-eritekwu uru. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbịa ebe a, ị ga-aga ụlọ ọrụ izizi mbụ nke Asia ọla, n'akụkụ ala nke atọ. Ọ dị mkpa ikwu na oge mmeghe sitere na 10 n'ụtụtụ ruo 6 n'ehihie.
foto akwụ ụgwọ: jemsweb
Enwere ike ịchọta ebe ọzọ ịzụta pel HongQiao. Ọ bụ ahịa karịsịa maka ndị njem nleta. Ihe dị mma bụ na oge mmeghe dị ogologo kemgbe ọ na-emepe ụzọ ya site na 10 nke ụtụtụ ruo 10 n'abalị. O zuru ezu iji gabiga ya kpamkpam ma họrọ pealu kachasị amasị anyị.
foto akwụ ụgwọ: ogogoro
China bụ paradaịs maka ihe adịgboroja. You ga-achọ ịzụta uwe, ihe egwuregwu ụmụaka, akpa, elekere na ọbụnadị ọla mma sitere n'ụdị ndị ama ama na ọnụahịa dị ọnụ ala. Ya mere, ka anyị gaa Yatai Xinyang Market. Iji nweta ebe a, ị ga-agarịrị na Museum of Science and Technology, n'akụkụ ọdụ ụgbọ oloko Pudong. Oge ọrụ sitere na 10 nke ụtụtụ ruo 6 nke ehihie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » China » Zụ ahịa na China: Ahịa Shanghai (Nkebi 1)
Nhọrọ snorkeling kacha mma na Puerto Rico